स्वप्न बगैंचा - साप्ताहिक
केशरशमशेर जबराले युरोप भ्रमणका बेला बेलायतका राजा एडवर्ड सातौंको बगैंचा अवलोकन गरेपछि त्यसैबाट प्रभावित भएर वि.सं. १९९९ सालमा आफ्नो निवास केशरमहलमा स्वप्न बगैंचा निर्माण गर्न लगाएका थिए। वि.सं. २०२१ सालमा केशरशमशेरको मृत्युपछि केशरमहल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यो बगैंचाले दशकौंसम्म उपेक्षित हुनु परेको थियो। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात स्वप्न बगैंचा विकास समिति गठन गरिएपछि यो बगैंचा पुनर्निर्माण गरिएको हो। अहिले यो बगैंचाले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत लोकप्रियता पाउन थालेको छ। पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा बगैंचाको पुरानो स्वरूप र विशेषता नबिग्रने गरी समयानुकूल परिवर्तन गरिएको छ। झन्डै ७ वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरी ०६४ सालदेखि यो बगैंचा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो। यो बगैंचामा ऋतुअनुसार फुल्ने फूल, विभिन्न प्रजातिका रूख एवं बुट्यानहरूले धेरैलाई आकषिर्त गर्छ। ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय शैलीमा निर्माण गरिएको यो बगैंचाको खाका वरिष्ठ वास्तुविद् किशोर नरसिंह राणाले तयार गरेका हुन्। ६ ऋतुका नामबाट निर्माण गरिएका सदन (आराम गृह), पोखरी, युरोपियन शैलीको बरन्डा तथा विभिन्न प्रकारका चरा बस्ने घरले यो बगैंचालाई थप आकर्षक बनाएका छन्। यो बगैंचामा प्रवेशका लागि नेपालीलाई ८०, विदेशीलाई १ सय ६० र वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकालाई ४० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
सेतो दरबार मंसिर २६, २०७१
पाँच राणाको सालिक कार्तिक २१, २०७१
टुँडाल श्रावण ३०, २०७१
छत्रपाटी श्रावण ९, २०७१
काँचो माटोको दरबार वैशाख १९, २०७१
बाइसधारा पार्क चैत्र २८, २०७०
कानदेव मन्दिर चैत्र १४, २०७०
चारुमती स्तुप फाल्गुन ९, २०७०
शालीनदी माघ १७, २०७०
गोरखा दरबार संग्रहालय माघ ३, २०७०